musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Kubatanidza kufamba nekure kure mashandiro chiitiko chiri kukura
Kufamba kwekushanya • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
TUI iri kutendeukira kune mamwe misika senge kukura kuri kuita kwekufambiswa kwekufamba uye ruzivo rwekushanda kure sezvo ichitangisa nyowani 'yekushanda' package.
Nekuda kweiyo COVID-19 denda repasirese rinoshanda kubva kumba ikozvino maitiro akajairwa kune vakawanda.
Mabasa anogona kukwira mukufarirwa sezvo kuwanda kwebasa kuchinjika kunounzwa sezvo nyika inodzokera kuhofisi.
Kupinda kwekutanga kweTUI mumusika webasa kwaigona kuona ichiva mutungamiri wemusika wekutanga.
Nekuda kwekufamba kunotarisirwa kudzoka zvishoma nezvishoma, TUI iri kutendeukira kumamwe misika senge kukura kuri kuita kwekufamba pamwe uye ruzivo rwekushandira kure sezvo ichivhura nyowani 'yekushanda' pasuru muchinangwa chekuve anotungamira mupi webasa idzva rekufambisa.
Nekuda kwedenda iri kushanda kubva kumba ikozvino maitiro akajairwa kune vakawanda uye mashandiro anogona kukwira mukuzivikanwa sezvo kuwanda kwebasa kuchinjika kunounzwa sezvo nyika inodzokera kuhofisi.
TUI yakacherekedza iyi yekukura maitiro kutanga uye vakagadzira yavo package ine yekure kure kushanda zvakakosha mupfungwa dzinosanganisira Wi-Fi uye yakatsaurirwa nzvimbo yekushandira mumakumi matatu emahotera ayo epasirese. Kushanda kure kungave chinhu chikuru kune vazhinji, uye kutanga kweTUI mumusika webasa kwaigona kuona ichiva mutungamiri wemusika wekutanga.
Ongororo ichangoburwa yakaratidza kufarira kwakanyanya kushanya kushoma kuhofisi post-COVID-19 ine 29% yevakabvunzwa pasirese vanongoda kushanyira hofisi pamwedzi, pamakota, kana pakakumbirwa nevakuru. Mumwezve muzvishanu (21%) haatombodi kushanyira hofisi zvakare.
Kuchinja kwekushanda kure uye vanhu vanofarira kushanyira hofisi kashoma kuratidza mukana wakanaka wemusika we TUI's ekushandira mapakeji. Iyo COVID-19 denda rakamanikidza kure kure kushanda kune vazhinji vashandi vemuhofisi, uye kuchinja kwavo mumanzwiro kunoratidza chishuwo chekuchengetedza izvozvi zvirongwa. Vazhinji vachange vachishuvira kutiza, uye shanduko yemamiriro ekunze inogona kupa kugadzirwa kwekuwedzera.
Imwezve mhenyu mhenyu yakawana kuti 45% yevakabvunzwa vakati mikana iri nani yekutarisisa chikonzero chekuchengetedza kushanda kure. Kupukunyuka pabasa kuchapa chiitiko chitsva chebasa kure kure nezvinokanganisa imba uye nezvose-zvinosanganisira zvekudyira zvinosanganisirwa, vashandi vanogona kutarisa kubasa vasina mutoro wakawedzerwa wezuva nezuva mabasa.
TUI ndiye wekutanga kushanya opareta kupa chaiwo mapakeji evashandi vari kure. Kunyangwe hazvo mamwe mahotera mapoka akapa mapakeji akafanana ku TUI, vazhinji vanongopa chete kushandiswa kwezuva kwekamuri. Mufambi wekushanya akabatanidza izvo zvakakosha zvekushandira zviri kure nekuzorora kugara mumahotera ayo.
Nekuda kwekufamba kunotarisirwa kutora nguva kuti iwedzere, yakanangana nekuwedzera kwekuda kwekushanda kure nekupa mashandiro epakeji anogona kubhadhara TUI uye tsigira kudzoka nekukurumidza kune pre-COVID mari yemitero yeanoshanya opareta.